रोचक Archives - खबर प्रवाह::Khabarprawaha.com रोचक Archives - खबर प्रवाह
यो अनौठो आलु खाँदा हुन्छ यस्तो चमत्कार (तस्विर)
तपाईहरुले तरकारीमा महत्वपुर्ण मानिने सेतो र सातो आलु त खाई नै रहनु भएको होला । तर जस्ले हामीलाई स्वास्थ्य रहन समेत मद्धत गर्छ । तर दुनियामा पनि यस्तो आलु छन् । जस्ले मानिसलाई आयुनै बढाउने मद्धत गर्छ । केहि समय अगाडि बैज्ञनिकरुले यस्तो आलुको उत्पादन गरेका थिए । जस्ले मानिसलाई दिर्घायु बनाउछन् । केहि वर्षको […]
जाँडरक्सी खाएपछि नेपालीहरू किन अंग्रेजी बोल्छन् ?
काठमाडौं। रक्सी पिएर अंग्रेजी बोल्नुको पछाडि कुनै वैज्ञानिक कारण पनि छ ? हामीले लामो समयदेखि ‘मिथ’ बनाउँदै आएको रक्सी र अंग्रेजी भाषाबीचको यो सम्बन्ध हालै एक वैज्ञानिक अनुसन्धानले पुष्टि गरेको छ। उक्त अनुसन्धानले भन्छ, ‘मान्छेले कुनै नयाँ भाषा सिकिरहेको छ भने सामान्य अवस्थामा भन्दा रक्सीको हल्का नसामा बढी धाराप्रवाह बोल्न सक्छ।’ के हो त त्यो […]
पिएचडी गरिरहेका बेलायतका सबैभन्दा ‘खतरनाक अपराधी’
एजेन्सी। बेलायतमा १५९ यौन अपराधमा जोडिएका एक व्यक्तिको पहिचान सार्वजनिक गरिएको छ । रिनहार्ड नाम दिइएका यी व्यक्तिको नाम १५९ यौन अपराधमा जोडिएको छ । उनले १३६ वटा बलात्कारका अपराध गरेको पुष्टि भइसकेको छ । अदालतका अनुसार रिनहार्डले ४८ जनालाई बाहिर फकाएर आफ्नो फ्ल्याटमा लैजान्थे र उनीहरुमाथि बलात्कार गरेका थिए । तर, प्रहरीले रिनहार्डले कम्तिमा पनि […]
एजेन्सी। हिन्दू शास्त्रमा पत्नीलाई पतिको अर्धाङ्गनी मानिएको छ । पत्नीको भाग्यको पतिको भाग्यमा पनि निकै ठूलो प्रभाव परेको हुन्छ । त्यसैले भनिन्छ कि विवाह पछि कुनै पनि व्यक्तिको भाग्यमा ठूलो परिवर्तन आउन सक्छ । तर, सबैको हकमा यस्तै हुनुपर्छ भन्ने छैन । कसैकसैको चाहिँ यसले झन् नराम्रो प्रभाव पारेको पनि हुनसक्छ । यदि कसैको विवाहपछि […]
डेढ क्विन्टल सुनले बनेको बाथटब, १ घण्टा नुहाउन ५ हजार
१८ वैशाख, काठमाडौं पैसा हुनेहरुका लागि के छैन यो दुनियामा ? रकम खर्चिने हो भने अब सुनको बाथटबमा समेत नुहाउन पाइने भएको छ । जापानको एउटा रेष्टुरेन्टले ग्राहकहरुलाई लग्जरी महसूस गराउनका लागि सुनको बाथटब जडान गरेको छ । सो विशेष बाथटब १३० सेमी चौडा र ५५ सेमी गहिरो रहेको छ । करीब डेढ क्विन्टल अर्थात् […]
१८ वैशाख, काठमाडौं यौनपिपासु मान्छेहरुले जनावरमाथि पनि अत्याचार गर्न छाड्दैनन् । तर पाप धुरीबाट कराउँछ भनेझैँ त्यस्ता मानिसहरुले सजाय पनि पाउँछन् ढिलो चाँडो । कम्तीमा पनि १२ वटा विभिन्न जनावरहरुसँग यौन क्रियाकलाप गरेको आरोपमा तिनजना युवकहरुले कठोर सजाय पाएका छन् । आरोपीहरुले घोडा, बाख्रा, गाई तथा कुकुरलगायतका जनावरलाई लगातार ५ वर्षसम्म बलात्कार गरेका थिए । […]
१८ वैशाख, काठमाडौं मानिसलाई गल्तीको पिण्ड पनि भनिन्छ । अर्थात् गल्ती र मान्छे एक आपसमा पर्यावाची नै हुन् । मान्छेले गल्ती नगर्ने भन्ने हुँदैन । तर कहिलेकाहीँ मान्छेले यस्तो गल्ती गर्दछ कि त्यसको असर भयानक हुन्छ अर्थात् इतिहासमै त्यो गल्तीलाई अभिशापको रुपमा चिनिन्छ । विश्वको इतिहासमा केही त्यस्तै चर्चित गल्तीहरु यी हुन् । · रुसका […]
१८ वैशाख, हेटाैंडा हामीकहाँ शिक्षाको व्यापारीकरणले गर्दा अभिभावकहरुलाई आफ्ना बच्चाबच्ची पढाउनसमेत सकस भइसकेको छ । किनकि निजी स्कुलहरुको शुल्क निकै चर्को छ । तर यो दुनियाँमा एउटा यस्तो स्कुल छ जहाँ अभिभावकले आफ्ना छोराछोरी पढाउँदा शुल्कको रुपमा रकम बुझाउनु पर्दैन फोहोरको पोको बुझाए पुग्दछ । भारतको असम राज्यस्थित पमोहीमा छ यो अनौठो स्कुल । उक्त […]
१८ वैशाख, हेटाैंडा सुन विश्वका महंगा धातुहरु मध्येको एक हो । यो व्यक्तिको मात्र होइन मुलुककै सम्पत्तिको सूचकको रुपमा पनि रहने गरेको छ । विश्वका धनी देशहरुसँग प्रसस्त मात्रामा सुनको भण्डारण रहेको छ । यी देशहरु विश्वमा सबैभन्दा धेरै सुन रहेका देशहरु हुन्ः अमेरिका : यो देश विश्वमा सबैभन्दा धेरै सुन भण्डारण रहेको देशको सूचिमा […]
१८ वैशाख, हेटाैंडा कुखुराले अण्डा पारेको भए कुनै समाचार बन्ने कुरा थिएन । तर जब कुनै ढुंगाले अण्डा पार्दछ, त्यो दुनियाँकै अनौठो र प्रमुख समाचार बन्दो रहेछ । छिमेकी मुलक चीनमा एउटा अण्डा पार्ने चट्टान छ । देशको दक्षिण पश्चिमी प्रान्त गिझोउमा रहेको त्यो चट्टानले हरेक ३० वर्षमा अण्डा पार्ने गरेको छ । २० मिटर […]
१८ वैशाख, हेटाैंडा परौंठा निकै स्वादिलो कसलाई नहोला र ? खाजाघरमा गई परौंठा नखाने सायदै छौं होला । तपाईंले अनेक थरीका परौंठा खानुभएको छ होला । तर के विश्वकै ठूलो राजा परौंठा चाख्नुभएको छ ? छिमेकी मुलुक भारतमा गई अब त्यो राजा परौंठा चाख्न पाइनेछ । भारतको हरियाणास्थित रोयल मुरथल ढावाले तयार पारेको उक्त राजा […]
१८ वैशाख, हेटाैंडा जापानका प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेलाई हालै एक फरक भूमिकामा देखियो । उनी आफ्नो निजी निवासको ढोका ढकढकाउने एउटा काठको डोर नकर ठोक्दै थिए । उक्त डोर नकर उनलाई क्यानडाका प्रधानमन्त्रीले आबेको हालैको क्यानडा भ्रमणका क्रममा उपहार दिएका थिए । कावागुची ताल नजिकैको आफ्नो निजी भिल्लाको ढोकामा उनले त्यो डोर नकर जडान गरेका हुन्, […]
१८ वैशाख, हेटाैंडा बेलायतको ब्लेनहाइम प्यालेसमा सुनको ट्वाइलेट कमोड जडान गरिँदैछ । बेलायती पूर्व प्रधानमन्त्री विंस्टन चर्चिल जन्मिएको उक्त दरबारको कोठासँगैको कोठामा उक्त सुनको ट्वाइलेट जडान गरिने भएको छ । द गार्जियनका अनुसार यो कमोड १८ क्यारेट सुनले बनेको हुनेछ । इटालियन कलाकार मौरिजो क्याटिलेनद्वारा सो ट्वाइलेटको निर्माण गरिएको हो र उनकै एकल कला प्रदर्शनीका […]
१२ बाक्सा पोर्न फिल्मका सिडी फ्याँकिदिएपछि बाबुआमाविरुद्ध मुद्दा
१८ वैशाख, हेटाैंडा अमेरिकाको इण्डियानाका एकजना पुरुषले आफ्नै अभिभावकविरुद्ध मुद्दा हालेका छन् । पोर्न फिल्मका सीडी तथा अन्य अश्लील सामग्रीहरु भएका पत्रिकालगायतका ठूलो परिमाणका सामाग्रीहरु नष्ट गरिदिएको भन्दै उनले आफ्नै बुवा–आमाविरुद्ध मुद्दा हालेका हुन् । उनका सीडी तथा पत्रिकाहरु यतिधेरै रहेछन् कि ती सबैको मूल्य झण्डै २९ हजार डलर पर्ने दाबी उनको छ । मिचिगनस्थित […]
१८ वैशाख, हेटाैंडा अमेरिकाकी जेसिका नामकी महिलाको प्रेमकथा केही महिना पुरानो हो, तर निकै रोचक छ । जेसिकाले झण्डै १४ वर्षअघि सन् २००५ मा छोरी जन्माएकी थिइन् । त्यतिबेला गर्भाधारणका लागि उनले शुक्रकिट दाताको सहयोग लिएकी थिइन् । दाताबाट लिएको शुक्रकिटले गर्भाधारण गरी छोरी जन्माएकी जेसिकाले छोरीको नाम एलिस राखिन् । अहिले उनकी छोरी १४ […]
पार्टी नेतृत्व सामु पार्टीका मझौला र युवा नेताहरुले भन्न नसकेको सत्य कुरा के हो भन्दा बरु ‘तपाईकी सासूलाई राजदुतबाट फिर्ता गर्न लगाउनुस् तर, राज्यद्वारा गरिएका बेथितिको विषय तपाइकी सासूको राजदुत पदसँग साट्न सकिन्न’ भन्लान् देउवासामु भन्ने नै हो । तर, न त नेताहरुले देउवा सामु यो कुरा भन्न सके, न त पारिवारिक घेराबाट उम्केर यो […]
नयाँ दृष्टिकोण, उर्जा र भावी कार्ययोजना सहितको सवल कांग्रेसले मात्रै मुलुकलाई नेतृत्व दिन सम्भव छ । कांग्रेसले सरकारका बारे चिन्ता लिन जरुरी छैन । किनकि बालुवाटारमा ‘बा’ भन्दै निहुरिएर जाने वाहेकलाई प्रवेश निषेध गरिएकाले सत्ता आफैंले सत्ताको आयु छोट्याउदैछ । समस्या त बूढानीलकण्ठ दरबारभित्रै छ, जहाँ दाहिने हात अञ्जुली बनाएर निधारतिर लग्दै ‘दर्शन हजुर’ भन्ने […]
नेवारीमा एउटा भनाइ छ ‘धायन मजुल, खंलायन मजुल’ अर्थात भन्न पनि नहुने, नभनी पनि नहुने । नेपाली कांग्रेसको आजको अवस्था ठ्याक्कै त्यस्तै छ । पछिल्लो निर्वाचनको हारबाट विचलित कांग्रेस नेतृत्वले कार्यकर्ताको गिरेको मनोवल उठाउने कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नै सकेन । निर्वाचनमा हार र जित स्वाभाविक प्रकृया हुन् । तर, बारम्बार सिहंदरबारको मात्र सपना देखेर त्यसैको मात्र […]
यो झूठको पुलिन्दा, अहंकारको पुलिन्दा !
यो नेपाल सरकारको कार्यक्रम हो वा महामहिम राष्ट्रपतिज्यूको निजी सरकारको कार्यक्रम हो ? प्रश्न यहीँबाट सुरु हुन्छ । मैले प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको छु- यो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम हो भने राष्ट्रपतिलाई थप विवादमा फसाउने र यो संस्थाप्रति मानसम्मान घटाउने गरी यत्रो गम्भीर त्रुटी सरकारले किन गर्‍यो ? जहाँसम्म नीति तथा कार्यक्रमको अरु विषय छ, यसको […]
शुक्रबार, वैशाख २०, २०७६ संसारभर मानिसहरु आफ्नै तवर तरिकाले चाड, पर्व तथा उत्सव मनाउँछन्। तीमध्ये इटालीको कोकुलो गाउँमा प्रत्येक वर्ष सर्प उत्सव मनाइन्छ। जुन निकै आश्चर्यजनक र रोचक मानिन्छ। प्रत्येक मे १ तारिखमा कोकुलो बासीहरु सर्पको पर्व मनाउँछन्। यस पर्वलाई उनीहरु उल्लासमय ढंगबाट लिने गर्दछन्। यस उत्सव तथा पर्व मनाउनुमा यिनीहरुको आफ्नै छुट्टै लामो […]